स्वदेश फर्केको ठिटो- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
स्वदेश फर्केको ठिटो
काठमाडौँ — चितवनको राप्ती नगरपालिका ११ स्थित कोराकका विश्वास चेपाङ जुन सपना साँचेर विदेश पुगेका थिए, त्यो साकार पारेपछि उनी अहिले दंग छन् । लिंकन विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर पूरा गरेलगत्तै फर्किएका उनले स्वदेश आएको एक महिनाभित्रै किङ्स कलेज, बबरमहलको कार्यक्रम संयोजकमा नियुक्त पनि भए ।
‘पढाइ सकियो । ५ महिनाको भिसा बाँकी थियो । थप बसे, समय किन सकाउनु ? समुदायका लागि केही गर्छु भनेर फर्किहालें’ २६ वर्षीय उनले भने । फर्केलगत्तै उनी केही दिन काठमाडौं बसे । अनि घर–गाउँको अवस्था बुझ्न कोराक पुगे । फेरि काठमाडौं फर्केर जागिरका लागि दौडधुप गरे । र, किङ्स कलेजमा स्नातकोत्तरको दुई कार्यक्रमको संयोजक बने ।
काम सुरु गरेपछि राजधानीमा बस्न सक्ने आधार भएको उनले बताए । उनको सोच छ, ‘चेपाङ समुदाय निकै गरिब छ र गरिबी हटाउन विस्तारै काम गर्नेछु ।’
उनकै घरमा पाखोबारीमा फलेको अन्नले ६ महिना बढी खानै पुग्दैन । सामान्यतया चेपाङ समुदायमा ६ महिना खाद्य अपुग हुने गर्छ । खान नपुगेको समयमा उनीहरू गिठ्ठा, भ्याकुर, टाँकी, सिस्नु खाएर छाक टार्ने गर्छन् । गाउँमा बालविवाहको समस्या उस्तै छ । स्कुल पनि बस्तीबाट टाढै छ र बालबालिका त्यति टाढा धाएर पढ्न मान्दैनन् । परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा बीचमै पढाइ त्याग्ने धेरै छन् । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पनि सहज छैन । र, पोषणयुक्त खानेकुराको अभावमा बालबालिकामा कुपोषणको समस्या पनि विकराल बनिरहेको छ ।
‘यस्ता समस्या झेल्दै हुर्किएको म कसरी विदेशमा बसेर रमाउन सक्थें,’ विश्वासले भने, ‘म मेरा लागि मात्र पढ्न गएको थिइनँ । मलाई मेरो समुदायले पनि भरोसा गरेको थियो, विश्वास
गरेको थियो । त्यसैले समुदायमा परिवर्तन ल्याउने अभियानमा लागेको छु ।’ २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा चेपाङको जनसंख्या ६८,३९९ रहेको छ । सबभन्दा धेरै २८,९८९ चितवनमा बस्छन् ।
‘परिवर्तनको सुरुवात मेरै घर र समाजबाट गर्नुपर्छ,’ विश्वासले भने, ‘त्यसपछि समुदायमा प्रवेश जानेछु । नयाँ बानेश्वरस्थित के एन्ड के कलेजबाट स्नातक गरेका उनी स्नातकोत्तर गर्न छात्रवृत्तिमा बेलायतको लिंकन विश्वविद्यालय पुगेका थिए । ‘एडभान्स डेभलपमेन्ट इन सोसल वर्क’ मा स्नातकोत्तर गर्ने क्रममा उनले बेलायतसहित डेनमार्क, पोल्यान्ड, पोर्चुगल र फ्रान्सको विकासलाई पनि नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाएका थिए ।
उनी ६ कक्षामा छँदै आमा पोइल गएकी थिइन् । पढाइमा खुबै रहर गरेपछि उनलाई बुबाले चितवन पर्साको अन्तोदय जनजाति आवासीय विद्यालय पुर्‍याए । त्यहाँ रहँदै बूढानीलकण्ठ स्कुल, काठमाडौंमा ४ कक्षामा नाम निस्कियो । उनले निकै मिहिनेत गर्न थाले । ०६५ सालको एसएलसीमा ७५.५ प्रतिशत अंक ल्याए । बूढानीलकण्ठमै ए लेभल सकेपछि उनी इरासमस मुन्डुज छात्रवृत्तिमा लिंकन विश्वविद्यालय पुगेका थिए । उनले पोर्चुगलका नेपालीबारे थेसिस गरेका थिए ।
– विमल खतिवडा
सगरमाथा र शेर्पाहरू
केही सहयोग चाहियो भने अपरिचित मानिससमेत तयार हुने । त्यस्ता मानिस र समाज सायदै भेटिन्छ । मलाई त अर्कै दुनियाँमा पुगेजस्तो भयो ।
काठमाडौँ — भारतकी १७ वर्षीया शिवांगी पाठकले चार महिनाअघि विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरेकी थिइन् । यी कान्छी आरोहीका नेपाल अनुभवबारे सुरेशराज न्यौपाने लेख्छन् :
घाँटीमा रुद्राक्षको माला । ‘काठमाडौंको पशुपतिनाथ मन्दिरको प्रसाद’ कुराकानीको सुरुमै आफूले लगाएको माला देखाउँदै उनले भनिन् । भारतको हरियाणा, हिसारकी शिवांगी पाठक । कसरी गाँसियो १७ वर्षीय भारतीय किशोरीको नेपाल र काठमाडौंसँग सम्बन्ध ?
शिवांगीमा सानैदेखि अरूभन्दा केही फरक गर्ने रहर थियो र केही साहसिक पनि । हिमाल चढ्ने काम सबैभन्दा फरक र साहसिक लाग्न थाल्यो उनलाई । विस्तारै हिमालका बारेमा चासो दिन थालिन् । त्यसमा आधारित सिनेमाहरू खोज्दै हेर्न थालिन् । तब बल्ल उनले थाहा पाइन्, हिमालहरूको त आरोहण पनि हुन्छ भन्ने । ‘तेन्जिङ र हिलारीका बारे पनि थाहा पाएँ । त्यसपछि त मनमा एउटा अठोट नै बनाएँ एभरेस्ट चढ्ने,’ उनले सम्झिइन् । अनि उनले आफ्नो निष्कर्ष सुनाइन्– बाआमालाई सगरमाथा चढ्ने ।
न हिमाल चढेको अनुभव छ न कुनै तालिम । एकैपटक विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमाल चढ्ने छोरीको कुरा सुनेर उनीहरूलाई पत्याउन गाह्रो भयो । सुरुमा सम्झाए र हप्काए पनि । तर, बाबुआमाको केही लागेन, शिवांगीले जितेरै छाडिन् । मंसिर २०७३ को उक्त निर्णयसँगै सुरु भयो ‘मिसन सगरमाथा’ । त्यतिबेलासम्म उनीसँग आरोहणको आधारभूत ज्ञानसमेत थिएन । त्यसैले उनी दार्जिलिङ, सिक्किम, जम्मु–कश्मीर, लद्दाकलगायतका ठाउँहरूमा तालिम लिन पुगिन् ।
करिब दुई वर्षको तयारीपछि शिवांगी गत वर्ष १८ चैतमा काठमाडौं ओर्लिइन् । काठमाडौं पुगेको केही दिनमै आरोहणसम्बन्धी एजेन्सीले उनका लागि दुई जना शेर्पा खटाइदियो दावा र नोर्बु । सगरमाथा चढ्ने मिति तय भयो, ३१ वैशाख २०७५ । आरोहणबारे जिज्ञासा राख्नासाथ उनको मुहारमा बेग्लै खुसी झल्कियो । लुक्ला विमानस्थल विश्वकै सबभन्दा डरलाग्दो भन्नेचाहिँ सुनेकी थिइन् उनले । लुक्लामा अवतरण गर्दाको अनुभवले त्यस्तै भएको उनले सुनाइन्, ‘जहाजले ग्राउन्ड छोएर केहीबेर गुडेपछि सिधै भित्तामा ठोकियो जस्तो भयो । तर, अचानक अर्कोतर्फ मोडिँदा निकै खुसी भएँ ।’
लुक्लामा दुई दिन बसेपछि शिवांगीको टिम उकालो लागे । बाटोमा पर्ने नाम्चे बजार र त्यहाँको सम्पन्नता देखेर उनलाई अहिले पनि ईष्र्या जाग्छ, ‘त्यति उचाइमा पनि त्यस्तो सुन्दर र विकसित सहर । त्यहाँ नपाउने कुरा के पो छ होला र १ त्यस्तो उचाइमा पनि हरेक सुविधा ।’ त्यसैगरी आधारशिविरतर्फ उक्लिँदाका रमाइला क्षणहरू सम्झिँदा पनि शिवांगीलाई अहिले बेग्लै आनन्द मिल्छ, ‘एउटा बेग्लै र सुन्दर दुनियाँ ।’
तर, खुम्बु आइसफल तरिसक्दा केही असहज परिस्थिति सिर्जना भयो । पहिलो शिविर पुग्दा नपुग्दै उनलाई असहज हुन थाल्यो । कमजोरी त आधारशिविर छाडेदेखि नै सुरु भएको थियो । ‘त्यतिबेला मेरा सपना हेर्दाहेर्दै टुट्न थाले भन्ने अनुभूति भएको थियो । माथि उक्लिएँ भने बाँचेर फर्कने सम्भावना थिएन । यति नजिक आएर पनि फर्किउँ कसरी ? त्यस्ता प्रश्न मनमा खेल्न थालेको थियो’ उनले भनिन् । बिरामी भएपछि एजेन्सीले पनि फिर्ता हुन भनिसकेको थियो । तर, शेर्पा ‘दाइ’ हरूलाई ‘बहिनी’ को आत्मविश्वासमाथि भरोसा थियो । उनीहरूले शिवांगीकै लागि पहिलो शिविरमै एक दिन आराम गर्ने निर्णय गरे र शिखरमा पुग्ने मिति एक दिन पर सारे । भोलिपल्ट उनको स्वास्थ्यमा निकै सुधार भयो । त्यसपछि उनीहरू जोस–जाँगरसहित अगाडि बढे ।
१ जेठ, आरोहणको निर्णायक दिन । त्यस दिन बिहान ६:४० बजे शिवांगीको टोली तेस्रो शिविरबाट माथि उक्लियो । उनीहरू चौथो शिविर पुग्दा साँझको साढे ६ बजिसकेको थियो । २ जेठ २०७५ बिहान ८:२१ बजे शिवांगीले बुनेको आफ्नो खुसीका लागि केही फरक गर्ने सपना साकार भयो । साथै त्यही क्षणमा उनी भारतकी सबैभन्दा कान्छी सगरमाथा आरोही पनि बनिसकेकी थिइन् । ‘मेरो जीवनको एउटा ठूलो लक्ष्य र सपना साकार भएको क्षण थियो त्यो,’ आरोहणका तस्बिरहरू पल्टाउँदै भनिन् ।
शिखरमा पुग्नासाथ सबैभन्दा पहिले आफ्नो देशको झन्डासँग र पछि दावा र नोर्बुले ल्याएको नेपालको झन्डा लिएर फोटो खिचाएकी थिइन् । अनि नियाल्न थालिन् वरिपरि । ‘समुद्रमा जता हेर्‍यो त्यतै समुद्र देखिएजस्तै त्यहाँबाट हेर्दा चारैतिर हिमालै हिमाल । सानादेखि ठूलासम्म । मनास्लु, कञ्चनजंघा,’ करिब ४० मिनेट शिखरमा बस्दाको क्षण सम्झँदै भनिन्, ‘ल्होत्से त छेउमै रहेछ । यसो हेर्दा उफ्रिएर त्यहाँ जाउँजस्तो, त्यति नजिक ।’
सगरमाथा शिखरमा पुग्नुभन्दा पनि ओर्लनु थप कठिन मानिन्छ । उनलाई त्यस्तै भयो । अक्सिजनको सिलिन्डर रित्तिँदै थियो । शरीर कमजोर बन्दै गएको थियो । चाँडोभन्दा चाँडो उनीहरूलाई चौथो शिविर पुग्नु थियो । हिलारी स्टेप सुनेजस्तै गाह्रो लाग्यो उनलाई । ‘त्यतिबेला मलाई निकै डर लागेको थियो । जिउँदै फर्किन सक्दिन भन्ने भएको थियो तर, सकिनसकी दावा दाइलाई पछ्याएँ,’ उनले सम्झिइन्, ‘चौथो शिविर पुगेपछि मात्र ढुक्क भएँ ।’
करिब दुई महिनापछि स्वदेश फिर्दा शिवांगीसँग सगरमाथा आरोहणको कीर्तिमानसँगै नेपालसँग जोडिएका अन्य थुप्रै लोभलाग्दा ‘याद’ हरू पनि साथमा थिए । नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता, काठमाडौं सहर र शेर्पा ‘दाइ’ हरूबाट विशेष रूपमा प्रभावित भएको शिवांगी स्विकार्छिन् । उनलाई दिल्लीबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लेको केही घण्टामै काठमाडौंले लोभ्याउन थालिसकेको रहेछ । गुडगाँवकी यी किशोरी त्यसअघि न कहिल्यै नेपाल गएकी थिइन् न उनलाई नेपाल र काठमाडौंका बारेमा खासै जानकारी नै थियो । कतिसम्म भने उनलाई नेपालमा पाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले चाहिने जति सबै सामान लिएर जानुसमेत भनिएको रहेछ । ‘म त चकित भएँ । पर्वतारोहणसम्बन्धी सामानहरू त त्यहाँ नपाउने केही रहेनछ । त्यो पनि एकसे एक अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका । मूल्य पनि उस्तै । किन होला नेपालका बारेमा त्यस्तो गलत प्रचार गरिएको ?’ उनले आश्चर्य व्यक्त गरिन् ।
ठमेलको बसाइ र पशुपतिनाथ दर्शनको क्षणलाई पनि उनी जीवनकै अविस्मरणीय मान्छिन् । ‘भगवान्कै समीपमा पुगेजस्तो । जताततै पूजा भइरहेको । भक्तजनहरूको भीडा । मन्दिरको अगाडि रहेको भगवान् शिवको बाहन नन्दीको ठूलो मूर्ति देखेर निकै रमाइलो लाग्यो,’ आफूले लगाएको रुद्राक्ष देखाउँदै भनिन् । यसबाहेक काठमाडौंको ‘कुल’ साँझले पनि उनलाई बेग्लै आनन्द दिएछ । दरबार मार्गमा राति अबेरसम्म पनि निष्फिक्री सयर । महिला र युवतीहरू मध्यरातमा पनि निर्बाध ढंगले घुमिरहेको देखेर उनलाई सुरुमा त विश्वास नै भएन । त्यस्तो लाग्नु स्वाभाविक पनि थियो । किनकि उनको देश भारत अझ दिल्लीमा त्यसरी हिँड्ने कल्पना पनि गरिँदैन । गाडीको हर्न पनि करिब शून्य बराबर ।
‘केही सहयोग चाहियो भने अपरिचित मानिससमेत तयार हुने । त्यस्ता मानिस र समाज सायदै भेटिन्छ,’ शिवांगीले नेपाल अनुभव सुनाइन्, ‘मलाई त अर्कै दुनियाँमा पुगेजस्तो भयो ।’ आरोहणका तस्बिर केलाउने क्रममा आफ्ना शेर्पा दाइहरूप्रति मात्र होइन, सम्पूर्ण शेर्पाहरूप्रति आफ्नो श्रद्धा र सम्मान रहेको उनले बारम्बार दोहोर्‍याइन् ।
‘सगरमाथा चढ्नका लागि त उहाँहरू भगवान्को दूत नै हो । आरोहण गर्न सक्ने र नसक्ने उहाँहरूकै हातमा हुन्छ । उहाँहरूमा जसरी भए पनि सफल होस् भन्ने भावना रहेको पाइयो,’ आफ्नो सफलताको श्रेय शेर्पाहरूलाई दिँदै भनिन्, ‘२० केजी बढीको भारी बोकेर सामान्य अवस्थाजस्तै हामीसँग बोलिरहेका थिए। मैले त तपाईंहरू मान्छे होइन, अर्कै ग्रहको प्राणी भन्थें ।’
दावा र नोर्बु दुई ‘दाइ’ को साथ त उनका लागि विशेष रह्यो । उक्लँदै जाँदा उनी कहिलेकाहीँ हतास पनि भइन् । तर, दावा र नोर्बुले शिवांगीको हौसलालाई डगमगाउन दिएनन् । पहिलो शिविरमा बिरामी हुँदा शेर्पा दाइहरूले गरेको हेरचाह त उनी कहिल्यै भुल्न नसक्ने बताउँछिन् । ‘त्यतिबेलामा निर्णय लिन कम्ती गाह्रो थिएन । तर, उहाँहरूले मलाई हरेस खान दिनुभएन ।’ शिवांगीले सुनाइन्, ‘त्यो बेला दाइहरूले मेरो आमाकै भूमिका निभाउनुभयो ।’
‘आफ्नी बहिनी र छोरीलाई जस्तै ख्याल गर्नुहुन्थ्यो । मलाई राति निद्रा लागेन भने आमाले जस्तै सुताउनु हुन्थ्यो,’ उनले भनिन् । उक्लिँदै जाँदा शिवांगीलाई खान मन लाग्न छाडेको थियो । तर, दाइहरूले उनलाई फकाएर हुन्छ कि थर्काएर सकेसम्म खुवाउने कोसिस गर्थे । उकालो हिँड्दा प्यास लागेपछि चिसो पानी पिउन खोज्दा बिरामी परिन्छ भनेर उनलाई हप्काउँथे उनीहरू ।
पहिलो शिविरमा छुटेका सामान लिनका लागि दावा र नोर्बुलाई फेरि माथि उक्लिनुपर्ने भएपछि आधारशिविरबाटै छुट्टिनुपर्‍यो यी ‘दाजु–बहिनी’ लाई । किनकि शिवांगीको काठमाडौं फर्कने कार्यक्रम यसअघि नै तय भइसकेको थियो । एकाएक छुट्टिनुपर्दा तीनै जनाका गह भरिएर आए । ‘आफ्ना अभिभावकबाट छुट्टिएको जस्तो भयो मलाई,’ शिवांगीले भनिन्, ‘खोइ के मोहनी लगाए नेपाल, नेपाली र शेर्पा दाइहरूले ? बारम्बार गइरहुँजस्तो लाग्छ ।’ उनले नेपालकै अर्को शिखर धौलागिरि आरोहणको योजना बुन्न थालिसकेकी छन् ।